by Waylon Jordan Jona 9, 2021 2,012 hevitra
Iray volana latsaka isika mandra-pahatongan'izany Netflix ny tahotra Street Trilogy debuts, ary ny sehatra streaming dia nametraka tranofiara vaovao androany hanome antsika topy maso lalina kokoa momba izay fampitahorana vaovao ananany!
The tahotra Street nanomboka namoaka ny boky tamin'ny 1989. Fihetsiketsehana somary marani-tsaina teo amin'i RL Stine izany, niandrandra fa nihalehibe ny mpihaino azy ary maniry boky maniry hiaraka amin'izy ireo izy ireo. Avo kokoa ny tsatoka ao amin'ireo boky ireo, ary na dia vitsy aza ny maty ao amin'ny Goosebumps boky, izay natolony tao tahotra Street dia nahery vaika kokoa.
Mahery vaika ny tranofiara vaovao, manolotra tantara izay mitsambikina mandritra ny fotoana miaraka amin'ny valiny mampivarahontsana. Topazo maso eto ambany, ary ampahafantaro anay raha mijery ianao tahotra Street rehefa manomboka amin'ny Netflix amin'ny 9 Jolay 2021!